नेपालमा एकैपटक खुल्यो ३८ हजारका लागि जागिर ! यस्तो छ अवसर (सूचनासहित) - Rising Dainik
नेपालमा एकैपटक खुल्यो ३८ हजारका लागि जागिर ! यस्तो छ अवसर (सूचनासहित)
October 11, 2020 Ramash KunwarLeaveaComment on नेपालमा एकैपटक खुल्यो ३८ हजारका लागि जागिर ! यस्तो छ अवसर (सूचनासहित)
काठमाडौं । हेटौँडा सिमेन्टले करिब ३८ हजार कामदारको माग गरेको छ ।आइतबार एक सूचना जारी गर्दै हेटौंडा सिमेन्टले ३८ हजार ६ सय ९५ जना कामदारको माग गरेको हो । यसमध्ये २ हजार ९ सय २० जना दक्ष र ३५ हजार ५ सय ७५ जना अदक्ष कामदार आवश्यक भएको हेटौँडा सिमेन्टद्वारा जारी गरिएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।सो कामदारको आपूर्ति आउटसोर्सिङ मार्फत् गर्ने भन्दै यसका लागि ३० दिनको अवधिभित्र इच्छुक आपूर्तिकर्तालाई बोलपत्र पेश गर्न आह्वान समेत गरेको छ ।
BREAKING NEWS : कोरोना महामारी फैलिएसंगै, यो मितिदेखी देशैभरका सम्पुर्ण कार्यालयहरु बन्द रहने !
घटस्थापना देखि सबै सरकारी कार्यालयहरु ब’न्द गर्ने सरकारको तयारी
बादल फेरी माओवादी केन्द्रमै !
April 8, 2021 Ramash Kunwar
च्याङ्ग्रा, खसी नआएपछि स्थानीयले तरकारी र फलफूल बलि दिएर मनाए
October 29, 2020 Ramash Kunwar
April 17, 2021 April 17, 2021 Ramash Kunwar